Uncategorized Archives - Cele Fans
မုံရွာ၊ ယင်းမာပင်၊ ဆားလင်းကြီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စစ်ရဟတ်ယာဉ် ပျံသန်းနေ
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာ၊ ယင်းမာပင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်များအပေါ်တွင် ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ စစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး ပျံသန်းလျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများက သတင်းပို့သည်။ “ရဟတ်ယာဉ်ကို နိမ့်နိမ့်လေး ပျံပြီး ပတ်ကြည့်နေတယ်ထင်တယ်။ ခရီးတစ်ခုသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖြည်းဖြည်းလေး ပျံနေတာ။ ပတ်ပြီး ကြည့်တာထင်တာပဲ” ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုသည်။ ——————- စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မုံ႐ြာ၊ ယင္းမာပင္၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအေပၚတြင္ ယေန႔ နံနက္ […]
၅…၅….၅၀၀ ကျပ်ပဲ ပေးပါ….. ၅၀၀ ရရင် အမေ့ဆီ ထမင်းဝယ်ပြီ ပြန်မယ် 😔😔😔 မီးပွိုင့် စိမ်းခါနီး….Back မှန်လေးထဲကနေ ရုတ်တရက် တွေ့မြင်လိုက်…. ကားလေး ဘေးချရပ်ပြီ……လမ်းလေး လျှောက်ကာ အဘရေ…တကုံး ဘယ်လောက်တုန်း? ? ၅…၅…၅၀၀ ပဲ ပေးပါကွာ (အဘက စကားထစ် မသန်စွမ်း တယောက်ပါ) တကုံးပဲ ရှိတော့တာလား….အဘ? ? မနက်တည်းက….ဒီတကုံးပဲ ရှိတာပါတဲ့ ( အဘက မသန်စွမ်းတော့ […]
မိန်းမ ၃၉ ယောက်ယူထားတဲ့ အိန္ဒိယက အမျိုးသား ကွယ်လွန်
မိန်းမ ၃၉ ယောက်ယူထားတဲ့ အိန္ဒိယက Ziona Chana ဆိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီလို့ ရိုက်တာသတင်းဌာနမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ သူ့မှာ မိန်းမ ၃၉ ယောက် ကလေး ၉၄ ယောက်နဲ့ မြေး ၃၃ ယောက်စုစုပေါင်းမိသားစု ၁၆၇ ယောက်ရှိပြီး အိမ်ကြီးတစ်အိမ်တည်းမှာပဲ နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်က ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သတင်းတွေကြောင့် […]
June 13, 2021 Cele Fans 0
အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၃၆၅ အနီး တံတားအောက်တွင် သေဆုံးသော အမည်မသိ နှစ်လောင်း
June 12, 2021 Cele Fans 0
ရန်-မန်း အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၃၆၅ အနီး တံတားအောက်တွင် သေဆုံးသော အမည်မသိ Db နှစ်လောင်းအား လာရောက်သယ်ဆောင်ပေးပါရန် တာဝန် ရှိသူမှ ဆက်သွယ်အကူညီတောင်ခံမှုကြောင့် သစ္စာတံခွန်လူမှုကူညီရေးအသင်းမှ သွားရောက်သယ်ဆောင်ကာ မန်းလေးမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ရင်ခွဲရုံသို့ ပို့ဆောင်ကူညီခဲ့ပါသည်။ ဆက်သွယ်ကူညီတောင်းခံ/လှူဒါန်းလိုပါက ရုံးဖုန်း Ph-09-91004560 သစ္စာတံခွန်လူမှုကူညီရေးအသင်း ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် တံခွန်တိုင် လေးတပ်ဗိုလ်ဘုရားဝင်းအတွင်း ——————– ရန္-မန္း အျမန္လမ္း မိုင္တိုင္ ၃၆၅ အနီး တံတားေအာက္တြင္ ေသဆံုးေသာ အမည္မသိ […]
“မိုးကြီးနိုင်သောနေရာများ သတိပေးနှိုးဆော်ချက် “
May 21, 2021 Cele Fans Comments Off on “မိုးကြီးနိုင်သောနေရာများ သတိပေးနှိုးဆော်ချက် “
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်း ကိုကိုးကျွန်း၏အနောက်ဘက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Tropical Cyclone”YAAS”ရဲ့အရှိုန်ကြောင့် လာမည့်မေလ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၃၀ရက်နေ့အတွင်း နေရာဒေအချို့မှာ နေရာကွက်ပြီး မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရက်များမှာ မိုးကြီးနိုင်သောနေရာများကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နှင့်ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးများစွာရွာသွန်းကာ နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်း ကိုကိုးကျွန်း၏အနောက်ဘက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အပူပိုင်းမုန်တိုင်း Tropical Cyclone”YAAS”ရဲ့ အခြေအနေကိုတော့ ယနေ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ အဆင်မပြေလို့ မနက်ဖြန်မှ အသေးစိတ် ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည် ခင်ဗျာ။ ဝေဖြိုးဟန်( လေကြောင်းမိုးလေဝသ) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အလယ္ပိုင္း ကိုကိုးကြၽန္း၏အေနာက္ဘက္တြင္ […]